Maltese Shih Tzu Mix Ulwazi Lokuzala - Izinhlobo
Maltese Shih Tzu Mix Ulwazi Lokuzala
IShih Tzu yaseMalta (eyaziwa nangokuthi iMalshi) iyipomponi elincane, elithandekayo. Umlingani ophelele welungu lomndeni 'elikhululekile'.
Uhlobo lomklami wezinja, olwakhiwe ngokuwela i-Maltese enhle kakhulu ene-oh Shiff Tzu.
IShih Tzu Maltese ayisiyo kuphela uhlobo lokuthandana, kepha, futhi ingadlala, iguquguquke kakhulu, futhi ingahambelana nezindlela zokuphila ezahlukahlukene (isb. Impilo yasemadolobheni esencane, echumayo nempilo yasedolobheni yothando).
Lolu hlobo lwamathoyizi omklami lubhekwa njengenja yokudlala, uma selukhulile, lufinyelela ku-12 ”ubude namakhilogremu ayi-12 ngesisindo. Banomlomo omfishane nekhanda eliyindilinga elinengubo ethambile engachitheki.
Ngakho-ke, uma unentshisekelo kulolu hlobo lokuxuba, qhubeka ufunda ukuthola isimo sabo, isikhathi sokuphila nosayizi njengoba sihlanganisa amaqiniso.
Amaqiniso aseMalta Shih Tzu
Uhlobo Lokuzala Amamiksi nokuningi
Inhloso Ubudlelwano noMklami
Ifanele i- Umuntu osekhulile, umnikazi onakile, noma ngisho nokwengeza okuncane emndenini!
Usayizi Kuze kufike ku-12 ″ kubo bobabili abesilisa nabesifazane
Isisindo 6 kuya ku-12 amakhilogremu
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-12 - 14
Ukuhluka Kwemibala Mhlophe, mnyama noma nsundu ngokuhlanganiswa nokumakwa okuhlukile
Isimo Wamnandi, Unothando futhi Uthembekile
Amaleveli Womsebenzi Phansi - Ukuhamba ngamandla imizuzu engu-15 - 30 usuku ngalunye kwanele
Ukusetshenziswa Kokudla Kwansuku zonke Kuze kufike ku-1/2 inkomishi yekhwalithi ephezulu
Izinkinga Ezaziwayo Zempilo I-Brachycephalic Respiratory Syndrome, i-White Shaker Syndrome, i-Patellar Luxation
Maltese Shih Tzu Ulwazi Lokuzala
IMaltese Shih Tzu Imidlwane
Maltese Shih Tzu Isimo
Ungayinakekela Kanjani iMalshi
Izinkinga Zempilo Ezaziwayo
Ukubukeka KweMalta Shih Tzu: Ingubo, Umbala Nezinwele
Ukuzilungisa kwe-Maltese Shih Tzu
IShih Tzu yaseMalta ikhuliswa ngabazali bohlobo olumsulwa; omncane futhi hypoallergenic Inja yaseMalta kanye noShih Tzu ohlakaniphile futhi ohlakaniphile.
Ngoba bobabili abazali banosayizi ofanayo, inkunzi nedamu zingashintshana.
Ngakho-ke, yavelaphi le nja encane yokuklama?
Yize bobabili abazali bevela ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba (iMalta evela eMedithera noShih Tzu wase-Asia); iMaltese Shih Tzu empeleni yazalwa kuqala e-United States ngawo-1990 .
Umqondo wokuxuba inja yaseMalta kanye nenja kaShih Tzu kwakungukwakha umngane omncane othandekayo ongazange achithe okuningi; kufana kakhulu ne-Shorkie .
Uma ungumlandeli wePretty Little Liars uzokwazi lokho U-Ashley Benson inomunye walezi nzalo zabaklami.
I-shih tzu maltese ayibonwa yinoma iyiphi iklabhu enkulu yenja ngoba iyinja eyi-hybrid.
Usayizi kadoti usukela phakathi kwemidlwane engu-6-8; ngenxa yobukhulu bawo obuncane lolu usayizi kadoti omkhulu. Udoti ngamunye uhlukile ngombala, njengoba kunjalo ngezinhlamvu eziningi zabaklami, ngakho-ke akunakushiwo ukuthi udoti ngamunye uzobukeka kanjani njengoba angavela ngemibala eminingi ehlukene.
Ithegi lentengo le-maltese shih tzu lisuka phakathi kuka- $ 400 - $ 800 USD, ngokuhlukahluka okuncike ekutheni umthengi uthenge kuphi.
Ungaba nenhlanhla yokuthola eyodwa esikhungweni sokutakula njengoba ukwamukela inja kuhlale kunjalo inketho yokufudumala kwenhliziyo .
Siyini isikhathi sokuphila saseMalta Shih Tzu?
Le nja iphila ngokwesilinganiso cishe iminyaka eyi-12-14. Ukuba inja ephelele engumngane omncane, nakanjani uzokuthokozela minyaka yonke ukuchitha ndawonye.
Likhulu kangakanani i-Maltese Shih Tzu eligcwele ngokugcwele?
Khumbula, lolu uhlobo lwezinja zokudlala. Ngakho-ke, umdlwane wakho ngeke ukhule kakhulu ngemuva kwezinyanga ezimbili ubudala (bheka ithebula elingezansi). Bobabili ubulili benja bacishe balingane.
Umdlwane (izinyanga ezimbili) Amasentimitha ayi-7 4 amakhilogremu
Inja (izinyanga eziyi-12) Amasentimitha ayi-10 6 - 12 amakhilogremu
IShih Tzu yaseMalta inesimo sothando kakhulu. Eqinisweni, balangazelela uthando futhi badinga ukwazi ukuthi ubathanda kangakanani, ubathanda kangakanani, ubathanda kangakanani. Njenge enye ingxube yaseMalta; uMorkie .
Banobuntu obukhulu kangaka bafanelekile kokubili asebekhulile nezingane. Lokhu kungenxa yokuthi zinomdlandla ngokwanele ukuthi zingagcina izingane zakho zimatasa, kepha futhi zingaba nokuthula futhi zishosholoze ngakho-ke zingumngane omkhulu wabantu asebekhulile.
Bangazethemba futhi kwesinye isikhathi basole abantu abangabazi. Lapho zingaziswa kahle kubantu ezingabazi; bangase benze ukufeyila okuncane .
Zimnandi nezinye izilwane ezifuywayo uma nje zethulwa futhi zihlangana nabantu njalo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi iShih Tzu Maltese ithole konke ukunakwa abakudingayo; ngaphandle kokunakekelwa okufanele nothando, lolu hlobo lungadinwa futhi lucindezeleke. Lokhu kungaholela ekuziphatheni okulimazayo nokungahambi kahle.
Izindaba ezimnandi zabo bonke abazali bezinja abakhululekile lapho njengoba lolu hlobo lomklami wezinja kulula ukuzinakekela.
Ukuba semaphethelweni amancane esikalini, i-Maltese Shih Tzu empeleni ayidingi ukudla okungako futhi abasoze bathi cha ekwelapheni okunempilo .
Amakholori ngekhilogremu yesisindo somzimba adingekayo enja
Amakholori (nge-lb ngosuku)
Abantu abadala Isine
Kungabukeka kungajwayelekile ukuthi umdlwane wakho uzodinga amakhalori amaningi ngosuku kunoMalshi wakho omdala (ngoba mancane), noma kunjalo lokhu kujwayelekile ngokuphelele .
I-puppy yakho idinga amakhalori amaningi njengoba ikhula ngakho-ke idinga amandla amaningi ukuxhasa le nqubo.
Umuntu omdala waseMalta uShih Tzu udinga inkomishi eyindilinga yokudla kwenja eyomile esezingeni eliphakeme ngosuku. Inketho enhle ukondla i-Malshi kibble yakho ekhethekile ngezinhlobo zezinja ezincane nezamathoyizi.
Kufanele uhlukanise okuphakelayo kube izabelo ezimbili usuku lonke. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi inja yakho ihlala yanelisekile imini nobusuku.
Ngenhlanhla yalolu hlobo, iShih Tzu Malteses ayijwayele ukukhuluphala! Kodwa-ke, mhlawumbe kungcono ukuwagcina kude neKentucky Fried Chicken kanye neMcDonalds. Njenganoma yisiphi isilwane, kubalulekile ukuthi sinamathele ekudleni okuhlangabezana nazo zonke izidingo zenja yokudla okunempilo kanye nosuku. Lokhu kuqinisekisa ukuthi isilwane sakho sihlala siphilile!
Khumbula, njenganoma iyiphi inja, izidingo zakho zokudla ze-maltese shih tzu zingashintsha ngokuya ngeminyaka yazo, ubukhulu nezinga lomsebenzi.
Kubalulekile ukuthi ungazicindezeli kakhulu lezi zinja eziklami, zingabantu abahlushwa isifo esaziwayo i-brachycephalic syndrome yokuphefumula ngakho-ke ukuzikhandla ngokweqile kungaholela ezinkingeni zokuphefumula.
Masibe neqiniso, ayikho inja eyothi cha egcekeni elikhulu elihle ukugijimela kulo. Kodwa-ke, igceke elikhulu alidingekile kumaShih Tzu aseMalta. Bangaphila ngenjabulo endaweni encane efana nefulethi. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi akukho ukuzivocavoca okufanele kwenzeke.
Azidingi uhlelo olunzima noma lokuvivinya umzimba (isb. Inja yokwalusa edinga ukuqeqeshwa kwe-agility). Kodwa-ke, kufanele ulindele ukuthi uzohamba ngazo imizuzu engu-15 kuye kwangama-30 ukuhamba nsuku zonke.
Kufanele futhi ubheke ukusebenzisa imidlalo ethile yokuvuselela ingqondo (bona iziphakamiso ezingezansi) ukubasiza ukuthi babagcine bejabule ngenkathi bengazibandakanyi ngaphezu kwazo.
Ngale ndlela bazoba nenkampani yakho, banake futhi basebenzise konke kokukodwa.
Khumbula ukusebenzisa i-leash njengoba bethanda ukuba ngabahloli abancane. IMalshi ihlakaniphe kakhulu ngakho-ke ihlala inentshisekelo yokuthola indawo yayo entsha nejabulisayo.
IShih Tzu yaseMalta iyinja ehlakaniphile ehlangene. Lokhu kwenza ezinye izici zokuqeqesha zibe lula; okuyisici esiphelele uma okokuqala ungumnikazi wemidlwane!
Njenganoma iyiphi inja, iMalshi idinga ukuqeqeshwa okuhle kokuqinisa .
Ukonakalisa ngokweqile noma iyiphi inja kungaholela emikhubeni emibi yokuziphatha (isb. ukubhujiswa nokukhonkotha) ngakho-ke qaphela uma kukhulunywa 'ngokuncancisa ngokweqile' i-pup yakho.
IMaltese Shih Tzu inomkhuba wokukhombisa izimpawu zokucindezeleka kubantu ongabazi. Kodwa-ke, lokhu kungaba ngumphumela wokungalingani ngokwenhlalo. Imisebenzi emikhulu yokuxhumana nabantu ifaka phakathi, uhambo oluya emapaki ezinja, ukuhamba okuncane uzungeze umakhelwane, ngisho nohambo oluncane olwandle olulungele izinja!
Mfushane ngemibono? Izindawo ze-Google ezilungele izinja endaweni yangakini futhi uzokuqiniseka ukuthi uthola izindawo ezipholile nezingafani zokuthatha iMalshi yakho.
Ukuvuselelwa kwengqondo okulula kwanele iMalshi yakho encane. Konke abakudinga ngempela ukwazi ukuthi uyabakhathalela futhi uyabathanda, ama-cuddles anele ukuwagcina ngaphezulu kokuhlala.
Zingaba wuhlobo lomfutho impela uma kudingeka, ngakho-ke imidlalo emincane ilungele ukukhuthazeka kwengqondo.
Zama imidlalo yokufihla uhambe uyofuna, noma, noma ulande.
Ngomdlalo omnandi wokufihla futhi ufune ukumane ugijime ne-Malshi yakho, bese ufihla ngokushesha. Biza igama lakhe bese bezama ukukuthola. Ukwenza kube mnandi ngokwengeziwe, ungangena ngisho nokushelela bese uzama izindawo ezintsha zokucasha uphinde ubize igama labo! Ngithembe, bazobe begijima bezama ukukuthola.
Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule ukuthi abenzi kahle uma bebodwa. Bangakwazi kalula uhlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana . Zidinga futhi zilangazelela uthando lwakho kokubili ngokwengqondo nangokomzwelo. Ngakho-ke inqobo nje uma lokhu kuzonikezwa lapho-ke kufanele nobabili nilunge.
IMalta uShih Tzu uyinja e-hybridi eyakhuliswa ngenhloso yokuqeda amaphutha ezempilo aziwayo akhona kubazali abangenalutho ngenkathi kwethulwa ijazi le-hypoallergenic laseMalta.
Kodwa-ke, ngeshwa lokhu akwenzeki njalo futhi ezinye izindaba zezempilo nezifo zisekhona. Njengomnikazi onothando, uzofuna ukuba nombono omfushane ngokuthi yiziphi izinkinga zempilo uMalshi wakho omncane angahle awele kuzo.
I-Brachycephalic Respiratory Syndrome kuvame ukubonakala ezinjeni ezinomumo omfishane futhi oyisicaba ikhanda / ubuso njengoba lokhu kubangela ukwakheka kwamakhala abo nezifinyila kube kufushane ngokungajwayelekile. Lokhu kungaholela ekuphefumuleni kanzima okungaholela ekulahlekelweni okukhulu wumoya uma bezikhandla ngokweqile. Ngeshwa iMalshi, zombili izinhlobo zabazali, iMalta kanye neShih Tzu, zithambekele ekufeni kwalesi sifo. Ngakho-ke, ukudlulisela inkinga yezempilo kubantwana bakho abampofu baseMalta uShih Tzu.
I-White Shaker Syndrome , kuvame kakhulu ezinjeni eziningi ezincane. Lesi sifo sibangela izinja umzimba wonke ukuzamazama kungalindelekile futhi kubangelwa ukuvuvukala kobuchopho okuyi-idiopathic. Kwesinye isikhathi abanikazi bangaphutha ukuzamazama kwenja yabo ngoba nje ibanda. Kepha uma ukundindizela kuqhubeka, kufanele uxhumane nodokotela wezilwane wangakini!
Patellar Ukunethezeka kuyinkinga ejwayelekile yamathambo ezinjeni eziningi. Lokhu kungaholela ekutheni idolo lenja yakho lisuswe. Ngokudabukisayo, lesi simo sivamile ezinhlotsheni ezincane nezamathoyizi. Ukucindezeleka isikhathi eside noma okuqhubekayo endaweni kungaholela ekuhlinzweni.
Ngakho-ke, sisungule iqiniso lokuthi bafana nepom pom. Kodwa ake sithole okuningiliziwe, i-Maltese Shih Tzu ibukeka kanjani ngempela?
Ngokuvamile, basohlangothini oluncane uma kuqhathaniswa nenja yakho ejwayelekile. Imizimba nekhanda labo, yize lincane, lilingana impela.
Bangaba namehlo amakhulu amakhulu, okungaba yi-hazel noma i-amber.
Amajazi abo ajwayele ukuba made (yize abanikazi bawo bevame ukubanika izinwele zezinwele ezisezingeni eliphezulu) futhi baqonde noma bagwedle.
Ngokuhlukile, abavamile ukuba nengubo yangaphansi. Le nja yazalelwa ngokukhethekile ukuqeda ukuchitheka. Yize ukuchitheka okuthile kusenzeka namanje. Lezi zinja zaziwa njenge-hypoallergenic (isb. Ukuncipha okuncishisiwe) ngakho-ke noma ngubani osemsebenzini wokuhlanza uzokubonga!
Ijazi labo lingavela ngemibala ehlukahlukene futhi lingahle lihlelele kusuka kokumhlophe, mnyama, nsundu, noma inhlanganisela yemibala. Isibonelo, omhlophe nomnyama, omhlophe nonsundu, onsundu nomnyama ... Uthola iphuzu!
Ukumakwa kwalezi zinja ezincane kuyahlukahluka kaningi ngakho-ke kwenza kube lula ukutshela i-maltese shih tzu yakho kwabanye.
Ukuxubha okulula kwanele ukuqeda lelo nani elincane loboya obedlulele nedander. Ukuxubha kungaba nsuku zonke noma kuncane njengokuphindwe kabili ngeviki.
Abanikazi bohlobo ngokuvamile bakhetha ukunqunywa izinwele zaseMalta Shih Tzu; ikakhulukazi ezinyangeni zasehlobo. Lokhu kuzokwenza nokuzilungisa kube lula kakhulu.
Uma ufuna ukugcina izinwele ze-pup yakho zihle futhi zibushelelezi, lapho-ke ukugeza kabili ngonyaka akuwona umqondo omubi. Ukunqunywa izinzipho njalo nakho akulimazi. Futhi qiniseka ukuthi amehlo abo agcinwa ehlanzekile njengoba bengase bathwale kakhulu! Uma amehlo abo engahlanzwa njalo lokhu kungaholela ekubulaleni izinyembezi (njengoba kubonakala ngokujwayelekile ohlotsheni lwabazali, iMalta).
Inja encane evumelana nezimo kakhulu, idinga ukuvivinya umzimba okuncane, futhi ayibizi ingalo nomlenze ekudleni kwezinja njalo ngenyanga.
Lezi pom pom ezithandekayo, ezinothando, ezihlakaniphile nezidlalayo zingumngane ophelele wanoma imuphi umndeni noma umuntu, noma ngabe kunjani esimeni sokuphila.
Vele uqiniseke ukuthi ukhombisa i-maltese shih tzu yakho uthando, ukunakwa futhi ube nesikhathi esanele sabo.
Phawula ngezansi uma nawe wazi ngomuntu onomusa futhi ophumayo waseMalta uShih Tzu, singathanda ukuzwa ukuthi banothando futhi banothando kangakanani!
Ama-FAQ e-Chihuahua Dog kanye nolwazi lwe-Breed
Ulwazi lwe-Field Spaniel Dog Breed Information
izithombe ze-teodup poodle
kusho ukuthini uma izidladla zenja zishisa
intengo yenkunzi yesiFulentshi
imibala ye-beagle ulamula nomhlophe
ikhabe liphephile lapho kungadliwa yizinja
chiuaua exutshwe noJack russell